ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် ဟွန်ဒါ အိုဒစီ ကားများ | ဟွန်ဒါ အိုဒစီ ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Silver Honda Odyssey 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Pearl White Honda Odyssey 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Lks 180 ညှိနှိုင်း
Pearl White Honda Odyssey 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Pearl White Honda Odyssey 2001 ??????? ???????????????? ????????????????????????????? ???????????????? ????????? A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ??????????...
Black Honda Odyssey 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Pearl White Honda Odyssey 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Gold Honda Odyssey 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Pearl White Honda Odyssey 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passen...
white Honda Odyssey 2000 for sale. The comfort features include A/C: Front,A/C: Rear,Original TV. The safety features include Airbag: Driver,Airbag: Passenger. The sound system includes Cassette...
ဟွန်ဒါ ဘရန်ထဲမှာ လူစီးများတာကတော့ အိမ်စီးကားတွေ ဖြစ်တဲ့ ဆလွန်ကားနဲ့ အခြား ၀ဘ်ဂွန် ဆိုဒ်ရှိတဲ့ ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟွန်ဒါ ဖက်စ် ဟတ်ဘတ်ကားတွေကိုလည်း အသုံးများတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဆီစား သက်သာမှုကြာင့် လူသုံးများပါတယ်။ နောက်ထပ် လူစီးများကြတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုက တစ်ခြားရိုးရိုးကားတွေထက် သက်သာစေတဲ့ စီးဗစ် ဟိုက်ဘရက်ကားတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုင်းဘရစ် စနစ်သုံး ကား ဖြစ်တာကြောင့် လောင်စာဆီစား သက်သာပြီး လူကြိုက်များရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဟွန်ဒါ စက်ရုပ်လို့ လူသိများတဲ့ ဟွန်ဒါ အင်ဆိုက် ကလည်း သူ့နေရာနဲ့သူ လူကြိုက်များ အဝယ်လိုက်နေပါ သေးတယ်။ ဟွန်ဒါမှာ ကားတွေတင်မကပဲ ဆိုင်ကယ်တွေပါ ဝင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားမှာဆိုရင်လည်း ဟဲဗီးဂျူတီ ကားများတောင် ဝင်ပါတယ်။ အခြားသော လုပ်ငန်းသုံးကားများလည်း ဝင်ရောက် ပါတယ်။ ဟွန်ဒါ အိုဒစီကိုလည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟွန်ဒါ အိုဒစီတွေဟာ မီနီဗန် ကား အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်း ဟွန်ဒါ အိုဒစီတွေကို မီနီဗန်ကားတွေ အဖြစ် ကမ္ဘာအနှံမှာ ရောင်းချသလို မြောက်အမေရိက မှာလည်း ရောင်းချပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမေရိက နဲ့ ကနေဒါမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စွမ်းဆောင်ရည် နဲ့ နည်းပညာ
ဟွန်ဒါ အိုဒစီတွေဟာ၂၀၁၅ ထိကို လက်ရှိ ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့ ကားအမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး တာရင့်ကား အမျိုးအစားတွေ အပါအ၀င် အမျိုးအစား (၅) မျိုးလောက်ကို ဟွန်ဒါက ဌင်းရဲ့ ဟွန်ဒါ အိုဒစီအတွက် ထုတ်လုပ်ရောင်းချပါတယ်။ ဌင်းတို့ထဲမှာ ဟွန်ဒါ LX, EX အပါအ၀င် တစ်ခြားအမျိုးအစားတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အင်ဂျင် မြင်းကောင်ရေ ၂၄၈ လောက်ထုတ်နိုင်တဲ့အမျိုးအစားတွေမှာတော့ မြို့တွင်းကို တစ်ဂါလံ ၁၉ မိုင်၊ မြို့ပြင် ၂၈ မိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်း အသုံးပြုများတဲ့ ကားတစ်စီးဖြစ်တဲ့ ဟွန်ဒါ ဖက်တ်အကြောင်းကိုလည်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ အင်ဂျင်မှာ ၁.၂ လီတာ၊ ၁.၃ လီတာ၊ ၁.၅ တို့ကို ထုတ်ပါတယ် ။ ပြည်တွင်းမှာတော့ အခွန်နဲ့ ဆီစားသက်သာလိုမူကြောင့် ၁.၃ လီတာကို ရွေးခဲ့ကြတာလို့ ထင်ပါတယ်။ မော်ဒယ်အားဖြင့် စလစ်မလိုဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၃စသည့်ဖြင့် ၀ယ်ယူလျက် ရှိကြပါတယ်။ ဟွန်ဒါ ဖက်ရဲ့ ၁၅၀၀ စီစီ အင်ဂျင်ဟာ မြင်းကောင်ရေအား ၁၀၉ နဲ့အတူ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ရီဗျူးတွေအရတော့ မြို့တွင်းကိုတစ်ဂါလံ ၂၇ မိုင်သွားပြီး မြို့ပြင်မှာဆို ၃၄ မိုင်သွားပါတယ်။
ဒီဇိုင်းပိုင်း အနေနဲ့ ဟွန်ဒါဖက်စ် မှာ အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး ရှိသည့်နည်းတူစွာ ဟွန်ဒါ ဖက်စ် ရှယ်တာကိုလည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဟွန်ဒါဖက်စ် ရှယ်တာတွေဟာ ပုံမှန် ဖက်စ်ကားတွေထက် ပိုပြီး ကိုယ်ထည် ရှည်လျားကြပါတယ်။ ဟွန်ဒါ ဖက်စ်တွေမှာ ပုံသစ်နဲ့ ပုံဟောင်းဆိုပြီး နှစ်ခု ရှိပါတယ်။ ပုံဟောင်းက အနည်းငယ် ချွန်ထွက်တဲ့ ပုံစံ မျိုးမဟုတ်ဘဲ တုံးတိတိ ပုံစံမျိုးရှိပါတယ်။ GD-1 လို့ခေါ်ပါတယ်။ နောက် ပုံသစ်ကတော့ GE-6 လို့ခေါ်ပြီး ထို မော်ဒယ်တွေကတော့ ၂၀၀၈ နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ မော်ဒယ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းခန်းလည်း အနည်းငယ်ပြာင်းလဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟွန်ဒါ အိုဒစီကလည်း မီနီဗန်ဖြစ်တဲ့ အတွက် အနည်းဆုံး လူ ၇ ယောက်၊ ၈ ယောက် စီးနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းမှာတော့ ၂၀၀၀ ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင် မော်ဒယ် နှစ်ရှိတဲ့ ဟွန်ဒါ အိုဒစီတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဟွန်ဒါကားတွေထဲမှာ အက်စ်ယူဘီ လေးဘီးယက် ကားများလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဟွန်ဒါ ဆီအာဗီ ဆိုရင် နာမည်ကြီး လေးဘီးယက်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အပြိုင်ကတော့ တိုယိုတာရဲ့  အာအေဗီဖိုး ဖြစ်ပါတယ်။ လေးဘီးယက်၊ နှစ်ဘီးယက် နှစ်မျိုးစလုံး ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဆီစားကတော့ မသက်သာ ပါဘူး။ သို့ပေမယ့် တိုယိုတာ ဟာရီရာနဲ့ စာရင် ဆီစားပိုသက်သာကြောင်း ကားဒရိုင်ဘာအချို့ က မှတ်ချက်ပေးထား ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းလည်း သင့်တင့်တာကြောင့် အဝယ်လိုက်တဲ့ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခြားအနေနဲ့ Honda Airwavr, Honda cross road နဲ့ Honda insight ဟိုက်ဘရစ်တို့ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟွန်ဒါကား အရေအတွက်ဟာ တိုယိုတာလောက်မများပေမယ့် တိုယိုတာကို အပြိုင်လိုက်နိုင်တဲ့ကား ဖြစ်ပါ တယ်။ ဂျပန်တစ်နိုင်ငံတည်းထွက် ဖြစ်တာမို့ အရည်အသွေးအပိုင်းမှာ ပြောစရာမရှိတဲ့ကားမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီ အရောင်းပြခန်းတွေနဲ့ အခြား လေလံတွေက နေ ၀ယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟွန်ဒါ အိုဒစီတွေကတော့ နည်းနည်း မော်ဒယ် နိမ့်တာမို့ ကားအရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်နေကျဖြစ်တဲ့ သီရီမင်္ဂလာ ဈေးဟောင်း အပါအ၀င် အွန်လိုင်း ရောင်းဝယ်မှုတွေ ဖြစ်တဲ့ နေရာတွေမှာ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။